🥇 ▷ Huawei P30 iyo P30 Pro horeyba waxay u leeyihiin taageerada adeegga 'Entel 4G Voice' ✅
Huawei P30 iyo P30 Pro horeyba waxay u leeyihiin taageerada adeegga ‘Entel 4G Voice’
Waxaan u haynaa war aad u wanaagsan dhammaan dadka isticmaala Huawei P30 iyo P30 Pro ee ku yaal dalka Chile, gaar ahaan haddii ay macaamiil u yihiin shirkadda Entel, maadaama aaladahaasi ay hadda diyaar u yihiin adeegga shirkadda 4G Voice.
Siday wax u dhacday waqti ka hor Huawei Mate 20 Pro iyo WOM, hadda P30 iyo P30 Pro waa aaladihii ugu horreeyay ee Android ee horeyba u lahaa taageerada 4G Voice service ee shirkadda Entel.
Xusuusnow in Entel ay ahayd shaqaalahii ugu dambeeyay ee hirgeliya adeegan illaa iyo goor dambe ma aanan aqoon wax ku saabsan Codka 4G ee iyaga, illaa bilowga Abriil iPhone wuxuu helay taageerada 4G Voice iyo Wi-Fi Call of Entel markii la yimid of macruufka 12.2.
Telefishanada casriga ah Huawei waxay ka heleen 4G Voice taageero barnaamijka casriga ah ee ka tagaya nooca 9.1.0.124 marka loo eego P30 iyo P30 Pro noocyadooda warshad la’aanta ah ee Chile, waqtiganna waxay kaliya haystaan ​​taageero 4G Voice, tan iyo Wi -Qaacyada wali ma taageerto.
Hadda waa inaan sugno oo keliya in hawlwadeenka Entel uu billaabo hawlgalinta adeegga 4G Voice, maadaama inkasta oo taleefannada casriga ah ee Huawei iyo Apple ay horey u haysteen taageerada, howl wadeenku wuxuu u baahan yahay inuu dhaqaajiyo adeegga. Laakiin degganaan akhristaha qaaliga ahow, maadaama marka ay taasi dhacdo annaguna waan idin soo socodsiin doonnaa.